DAAWO: Afgambi Milatari oo ka Socda Dalka Zimbabwe, Wararkii u dambeeyay | Kalshaale
DAAWO: Afgambi Milatari oo ka Socda Dalka Zimbabwe, Wararkii u dambeeyay
Nairobi (Kalshaale) Dhaqdhaqaaq ciidamada xoogga ee dalka Zimbabwe ay wadaan ayaa loo maleynayaa in uu ku saleysanyahay inqilaab xukumada madaxweyne Robert Mugabi lagu fulinayo. Uguyaraan sadex qarax ayaa ka dhacay magaala madaxda dalkaasi ee Harare aroornimadi maanta, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA WARARKII U DAMBEEYAY
Dhinaca kale Taliye ku xigeenka ciidanka oo ka hadley warbaahinta dowlada ayaa dadweynaha reer Zimbabwi usheegey in ay isdajiyaan, waxaanu uu yiri; wax afganbi ah kama jiro dalka. Jeneraal Sibusiso Moyo, oo ah taliye ku xigeenka ciidanka ayaa sida oo kale shaaciyey in uu Madaxweyna Robert Mugabi nabad qabo.